Xukuumada federaalka oo soo dhawaysay natiijada shirkii Nairobi; xeer-ilaaliyihii guud ee dawladda oo xilka laga qaaday. – Radio Daljir
Xukuumada federaalka oo soo dhawaysay natiijada shirkii Nairobi; xeer-ilaaliyihii guud ee dawladda oo xilka laga qaaday.
Muqdisho, May 30 – Kulan aan caadi ahayn oo shalay galinkii danbe ay ku yeesheen magaalada Muqdisho golaha wasiirrada dawladda federaal KMG ah ee Soomaaliya ayaa looga dooday arrimo badan oo ku taxaluqa xaaladaha kala duwan ee dalka.
Kulanka oo uu shir guddoominayey R/wasaare Maxamed C/llaahi Maxamed ‘Farmaajo’ ayaa si gaar ah loogu falan-qeeyey nuxurkii ka soo baxay shirkii 25-kii bishan ka dhacay magaalada Nairobi kaasoo uu hormuud ka ahaa golaha ammaanka ee QM, laguna darsayey kala duwanaanshaha aragtiyeed ee qaybaha Soomaalida sidoo kalena lagu iclaamiyey shir xallin khilaafeed.
Golaha ayaa siwayn u soo dhaweeyey nuxurkii ka soo baxay shirkaasi Noirobi markii ugu horraysay, kuna tilmaamay in uu ahaa shir micne iyo maslaxad wayn u lahaa ummadda Soomaaleed, waxna ka baddali-kara muranka iyo is-maan-dhaafsanaanta muddada aloosnayd. waxaana intii uusan shirku si toos ah u fumin war-bixin laga dhagaystay R/wsaare Farmaajo taasoo uu uga warrmayey waxa ay horgeeyeen dawlad ahaan shirkii Nairobi.
Dhinac kale goluhu fadhigaasi shalay waxay uga doodeen qorshe ay u soo gudbisay wasaaradda caddaaladda iyo arrimaha diinta ee dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya kaasoo muujinayey dib u habayn lagu sameeyo hay’adda garsoorka dawladda.
Goluhu dood dheer oo ay arrinkaasi ka yeesheen kaddib waxay garawsadeen baaxaladda baahida loo qabo wax-ka-baddal dhab oo lagu sameeyo garsoor, iyagoo xilkii ka xayuubiyey xiir-illaliyihii dawladda C/llaahi Daahir Barre, isla markaana xilkaasi u magacaabay C/qaadir Maxamed Muuse.
Wasaaradda caddaaladda ayaa muddo hadal-haysay baahi loo qabo wax-ka-baddal iyo tayeyn rasmi ah oo lagu sameeyo laamaha garsoor ee dawladda federaal KMG ah ee Soomaaliya, taasoo markii ugu horraysay wasaaradda ay u suurtagashay qoshaheeda in ay hor-gayso golaha xukuumadda.
Cali C/qaadir Cali ‘Maykal’
Daljir, Muqdisho. http://daljir.com/